Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-Trailer Emuva Ye-4 Emuva Yegazi 'Egcwaliswe NgeZombies Eziningi Ukusebenzelana Nakho
Imidlalo yeWarner Bros. kanye neTurtle Rock Studios ' Emuva 4 Igazi iphezulu ohlwini lwethu lwemidlalo yezinyathelo eziningi elindelwe kakhulu yabadlali abaningi kulo nyaka. Ukulinda kuze kube ngu-Okthoba nakho akukude kakhulu. I-hop emfushane nje, weqe futhi ugxume uhambe. I-trailer yakamuva ye Emuva 4 Igazi iphinda kabili ekubulaweni kwabantu abaningi kwazo zonke izinto ezingafakwanga ezandleni zakho kanye nabasebenzisana nabo.
Amazwibela we Emuva 4 Igazi kuhamba kanjena:
Emuva 4 Igazi ungumuntu wokuqala ukubambisana we-zombie Bhalobhasha kusuka kubadali beLeft ehlonishwa ngokusobala 4 I-franchise efile futhi inezici ezijabulisayo, ezinamandla zemidlalo yesikhashana neyokuguquguquka okukhulu, isenzo esenziwe ngezifiso ukugcina abadlali beza emuva ngoba Okuningi. I- Emuva 4 Igazi Indaba yenzeka ngemuva kokuqubuka okuyinhlekelele lapho iningi labantu libulewe noma litheleleke yi-Devil Worm. Benziwe lukhuni yimicimbi engachazeki futhi baba nesibindi sokulwa ngoba owokugcina wobuntu, iqembu lama-veteran e-apocalypse abizwa ngokuthi ama-Cleaners ahlanganyele azothatha izinto ezesabekayo ezithelelekile ezaziwa njenge-Ridden futhi abuyise umhlaba.
Ungaqonda phezulu LAPHA to zibhalise ukuze udlale umdlalo ekuqaleni kwe-beta. Agasti 5-9 ibona ukufinyelela kokuqala okuvulekile nge-beta evulekile evamile eyehla ngo-Agasti 12-16.
Emuva 4 Igazi iyatholakala ngoba I-Xbox Series X | S, i-Xbox One, i-PlayStation 5, i-PlayStation 4 ne-PC eqala ngo-Okthoba 12.
UHe-Man ubuyile futhi ubheke kuNetflix neMasters of the Universe: Isambulo. Funda kabanzi lapha.
Emuva 4 IgaziImidlaloKwesobunxele be-4 AbafileXbox OneUchungechunge lwe-Xbox X